MR MRT: Discipline and System- စည်းနှင့်စနစ်
Discipline and System- စည်းနှင့်စနစ်
Dhammagarden.comမှာ Dr Ashin Indaka တစ်ဆင့်ဖော်ပြတဲ့ လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ “ပြည်တွင်းဖြစ်နိုင်ငံခြားသား”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံ လည်ပတ်နေပုံ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ. . .။ သူ့တို့စံနစ် နဲ့ သူတို့စည်းကမ်း။ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် မဟုတ်တောင်မှ ယေဘုယျအားဖြင့် အကောင်းလို့ ဆိုနိုင်။
ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဆောင်းပါးထဲက စာပိုဒ်တစ်ခု -
“နောက်ပြီးတော့ မြို့တွေရွာတွေ သန့်ရှင်းမှုအားနည်းတာ၊ လမ်းပေါ်အမှိုက်ပစ်တာ၊ ကွမ်းတံတွေးထွေးတာ စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
မြန်မာတွေ စည်းကမ်းလုံးလုံး မရှိဘူးလို့ အပြစ်ပြောကြတာ ရှိသေးတယ်။
စင်ကာပူများ သိပ်သန့်ရှင်းတာပဲလို့လည်း ခဏခဏ ပြောကြတယ်။
စင်ကာပူက လမ်းထောင့်တိုင်းမှာ ယူနီဖောင်းဝတ်ရဲတွေ စောင့်နေကြပြီး
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လမ်းဖြတ်ကူးသူတွေ၊ အမှိုက်ပစ်ချသူတွေကို
ချက်ချင်းဖမ်း ဒဏ်ရိုက်လုပ်တာတွေကျတော့ ထည့်မပြောကြဘူး။”
စင်ကာပူကလူတွေ စည်းကမ်းရှိတာ စောင့်ပြီးဒဏ်ရိုက်နေလို့သာပါ၊ လွှတ်ထားလိုက်လို့ကတော့ စည်းကမ်းပျက်ကြမှာပါပဲလို့ ဆိုလိုချင်သလား မသိ။ အဲဒီလို ပြောရင်လည်း လက်ခံ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိ။ စည်းကမ်းရှိအောင် စောင့်ပြီး ထိန်းပေးနေတာကိုလည်း ကောင်းတယ်လို့ လက်ခံ။ ဥုံနဲ့ရရ ဖွနဲ့ရရ စည်းကမ်းရှိဖို့က အဓိက။ ပကတိစိတ်နဲ့ စည်းကမ်းမရှိတတ်သေးဘူး၊ စည်းကမ်းမရှိနိုင်သေးဘူးဆိုရင် စောင့်ပြီး ထိန်းပေးနေတာကို ချီးကျူးအသိအမှတ် ပြု။ နောက်တစ်ခုက အစောင့်မရှိလည်း တော်ရုံတန်ရုံ အသိရှိတဲ့လူဆိုရင် အမှိုက်မပစ်ရဲလောက်အောင်၊ အမှိုက်မပစ်ရက်လောက်အောင် သန့်ရှင်းဝင်းလက်နေအောင် လုပ်ထားပုံကိုလည်း တတ်နိုင်ရင် အတုခိုး။
“စင်ကာပူက လမ်းထောင့်တိုင်းမှာ ယူနီဖောင်းဝတ်ရဲတွေ စောင့်နေကြ”တယ် ဆိုတာလည်း ပြောသလောက်ကြီး မဟုတ်။ သတိထားမိသလောက်တော့ စည်းကမ်းမရှိရှိအောင် အတင်းအကြပ်ကြီး လုပ်နေရတာ မဟုတ်။ ရဲအစောင့်တွေ ကြောက်ခမန်းလိလိ အများကြီး ရှိနေတာ မဟုတ်။ ကြိုးကြားကြိုးကြား သွားသွားလာလာ ဘာတိဘာသာ ရှိနေကြ။ ပုံမှန်လူ၊ သာမန်လူ၊ အရပ်သားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ရဲတွေကို ထည့်တွက်စရာ မလို။ ရဲ ရှိနေမှန်းတောင် သိစရာ မလို။ ဒီကြားထဲက တစ်ခုခု မတော်တရော် လုပ်မိလိုက်တာကို ရဲသိသွားရင်တော့ တကယ်ဆော်။ ဆင်ခြေမပေးရ။ အသနားမခံရ။ လာဘ်ထိုးလို့လည်း ရမှာမဟုတ်။
နောက်ပြီး ရဲစောင့်တယ်ဆိုတာလည်း စည်းကမ်းပျက်သူကို ဒဏ်ရိုက်ဖို့သက်သက် ရယ်လို့တော့ ဟုတ်ပုံမရ။ လိုအပ်ရင် လိုအပ်တဲ့လူကို ကူညီဖို့၊ အကြမ်းဖက်တာတွေ လုတာတွေ ကာကွယ်ဖို့ စတဲ့စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်း ရှိအုံးမှာ။ ငွေကုန်ခံပြီး အစောင့်ရဲတွေ ခန့်ထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု သတိရမ်ိသေး။ ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်ရင် အတုခိုးသင့်တဲ့ သူတို့စနစ်ကို ခပ်ရေးရေး မြင်လိုက်ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု။
ဘုန်းကြီးလေးပါး နေတဲ့ ဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းဘုန်းကြီး ခရီးသွားနေတဲ့အချိန်၊ လက်ထောက်ဦးဇင်းသုံးပါးသာ ကျောင်းမှာ ရှိနေတုန်းက။ မနက်စောစော ငါးနာရီခွဲ။ အတွင်းကနေ ကန့်လန့်ချ ပိတ်ထားတဲ့ ဓမ္မာရုံ အ၀င်တံခါးရှေ့မှာ မှောက်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ၀တ်ထားတာကလွဲလို့ ကိုယ်လုံးတီး။ အသေလား အရှင်လား မသေချာ။ စောစောထ တံခါးဖွင့်တဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါး တံခါးဖွင့်ဖွင့်ချင်း အဲဒီလူကို တွေ့လိုက်ရတော့ လန့်သွား။ တံခါးပြန်ပိတ်ပြီး ကျိန်းနေတုန်းဖြစ်တဲ့ ကျန်တဲ့ ဦးဇင်းနှစ်ပါးကို ဖုန်းဆက်နှိုးပြီး အမြန်ဆင်းခဲ့ကြဖို့ခေါ်။ ကိစ္စက အကြီးကြီး ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ ဂေါပကဥက္ကဋ္ဌကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြား။ ရဲဌာန အကြောင်းကြား။
“လူတစ်ယောက် မှောက်နေတယ်၊ သေသလား ရှင်သလား မသိဘူး”ဆိုတဲ့ တိုင်းကြားချက်ကို အခြေခံပြီး ရဲဌာနက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပုံ အသိအမှတ်ပြုလောက်စရာ။ ရဲဌာနက “ငါးမိနစ်အတွင်း ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်”တဲ့။ ဒါပေမယ့် . . . ။ သုံးမိနစ်နဲ့ ရောက်လာ။ ရဲကားတစ်စီး။ အသက်နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်လောက် ရှိမယ်ထင်ရတဲ့ ရဲနှစ်ယောက်။ ခြောက်လုံးပြူး ကိုယ်စီ။ လက်ထိပ်လည်းပါ။ ရဲတစ်ယောက်က မှောက်နေတဲ့လူနားသွားပြီး “Excuse me . . .”တဲ့။ ယဉ်ကျေးတာလား။ ဟန်ဆောင်တာလား။ Formalityဆိုတာလား။ လက်စသတ်တော့ လူသေမဟုတ်။ လူမူး။ ငမူး။ တံတိုင်းကျော်ပြီး ၀င်လာခဲ့။ မူးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရူးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု။
နောက်တစ်ခု လိုလိုမယ်မယ် သူတို့ စီမံထားပုံက လေးစားစရာ။ ရဲကားထက် နှစ်မိနစ်လောက် နောက်ကျပြီး ambulanceဆိုတဲ့ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီး ရောက်လာ။ အသက်နှစ်ဆယ့် ငါးနှစ်လောက်ပဲ ရှိမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ရဲမေနှစ်ယောက် ကားပေါ်ကဆင်းလာ။ လူနာထမ်းစင် (ဒါမှမဟုတ်) လူသေထမ်းစင်တစ်ခုကို နှစ်ယောက်သား ရှေ့နောက်ဦးပဲ့ လက်နဲ့ဘယ်ညာ ကိုင်မလျက်သား။ အားပါးပါး . . . တကယ်လုပ်ကြမယ့် ပုံ။ ရဲတစ်ယောက်က မလိုဘူးဆိုတော့ ချက်ချင်းပြန်သွားကြ။
အမူးကောင်းကောင်းမပြေသေးတဲ့ ငမူးကို စစ်ကြမေးကြတုန်း ဂေါပကဥက္ကဋ္ဌ ရောက်လာ။ တပည့်တော် လုပ်လိုက်မယ်။ အရုဏ်ဆွမ်း ဘုဉ်းပေးဖို့ ကြွကြတော့။ နောက်မှ အကြောင်းအရာကို ပြန်ပြောပြ။ စစ်ကြမေးကြ အဖြေက ဘာမှ မရေရာ။ ဖြေပုံက မူးတစ်ဝက် ရူးတစ်ဝက်။ အင်္ဂလိပ်ကို ကောင်းကောင်းမပြောတတ်တာလည်း ပါမှာ။ လံကွတ်တိနဲ့ ကိုယ်လုံးတီးမို့ ပတ်စပို့မပါ။ ကဒ်ပြားတွေဘာတွေလည်း မပါ။ စီးတီဟောက လာတယ်ဆိုတာပဲ တိတိကျကျသိရ။ သူ့အကြောင်းကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ်။ လောလောဆယ် ရဲဌာန လိုက်ခဲ့။ အသိတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် မမှတ်မိဘူးလား။ မှတ်မိ။ ရော့ ဒီဖုန်းနဲ့ဆက်။ မင့်သူငယ်ချင်းကို ရဲဌာန လိုက်ခဲ့ဖို့ ပြောလိုက်။ လက်ထိပ်ခပ်။ ဂွပ်။
ဂေါပက ဥက္ကဋ္ဌ တရုတ်ကြီး ပြန်ခါနီး ပြော။ “အဲဒီကောင် မြန်မာ။” “မဟုတ်တာ။ သူ မြန်မာဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။” “သူ ဖုန်းဆက်တော့ မြန်မာစကား ပြောတာ ကြားလိုက်တယ်။” ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီး မှောက်နေတဲ့ ငမူးဖြစ်နေတော့ မြန်မာဆိုတာကို လက်ခံဖို့ အင်တင်တင်။ ကျားကျား မီးယပ်လုပ်။ “မင်းတောင် မြန်မာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာစကား နာလည်သေးရင် အဲဒီကောင်လည်း မြန်မာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာစကား ပြောတတ်တာ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။” “ဟားဟားဟား . . . အိုကေ အိုကေ။”
စပ်မိလို့ ဒီမှာ စင်ကာပူ ကဗျာတစ်ပုဒ် “စင်္ကာပူရ”
တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ စင်ကာပူကို အထင်ကြီးပြီး ကိုယ့်မြန်မာကိုယ် နှိမ့်ချရာ ရောက်သွားရင် ရေးသားတင်ပြပုံ မကျွမ်းကျင်တာပဲလို့သာ မှတ်ကြပါ။
Picture from (24 June 2011):
Posted by Ashin Acara. at 5:36 AM